Tuesday February 27, 2018 - 11:45:18 in Wararka by Super Admin
Socdaalka Kheyre ayaa la sheegay in uu salka ku hayo qaboojinta xiisadda kala dhaxeysa dowladda imaaraatka carabta oo bilihii lasoo dhaafay lagu eedeynayay in ay taageeri siinayso siyaasiyiinta mucaaradsan nidaamka Farmaajo.
Soo dhoweyn heerkeedu hooseeyo ayaa xasan Cali Kheyre loogu sameeyay magaalada Abu Dhabi, wakaaladda wararka Imaaraatka Carabta ayaa sheegtay in Suheyl Mux'med Bin Faraj oo ah wasiirka warshadaha iyo Korontada uu Kheyre iyo wafdigiisa ku qaabilay madaaarka Abu Dhabi.
Socdaalka wafdigan ayaa imaanaya xilli shirkadaha imaaraatka ay qabsadeen dekadaha caalamiga Boosaaso iyo Berberka islamarkaana uu jiro khilaaf u dhaxeeya Jabuuti iyo UAE, khilaafka wadamada khaliijka ayaa saameyn ba'an ku yeeshay wadamada geeska qaaradda Afrika.
Dowladda Qadar ayaa larumeysanyahay in taageera dhaqaale oo aad uballaaran ay siiso dowladda Federaalka taas oo ku riixday maamulka Farmaajo in uu istaago mowqif dhax dhaxaad ah oo aan ka farxin xulufada Sacuudiga iyo imaaraatka carabta.
Boqolaal Maleeshiyaad ah oo dowladda Imaaraatka si toos ah u hoos taga ayaa saldhigyo ku leh magaalada Muqdisho waxayna maleeshiyaadkaas bil ka hor fuliyeen weerar lagu qaaday guriga Cabi Qeybdiid.